စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: ကြယ်ကြွေညနဲ့ လက်ရှိဘဝ
ကျမတို့တွေမှာ သံယောဇဉ်လျော့ပါးစ ပြုလာနေကြပြီလား..
လူတစ်ဖက်သားကို လွယ်လင့်တကူ ချစ်ကြင်နာစိတ်တွေ လျော့ပါးလာနေပါသလား..
ယုံကြည်မှုမှာတောင် မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်လိုက်ရမှုတွေ များနေပါသလား..
ဝေခွဲမရတဲ့ ဒွိဟစိတ်တွေ တပုံတပင်နဲ့ အထီးကျန်စိတ်တွေ ပိုပိုတိုးလာနေပါသလား…
၂၄ နာရီကြောင့်သာ တရက်ပြည့်ပြည့်သွားသော အချိန်တွေ နေ့ရက်တွေ များများလာနေပါသလား…
လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနှင့် အွန်လိုင်း အင်တာနက်ဂိမ်းတွေပေါ်မှာသာ လူတွေဟာ စွဲလမ်းစိတ်တွေ များလာနေပြီလို့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်.. တကယ်တမ်းရော လူတွေဟာ အဲ့ဒီလို နေရာတွေမှာ အရူးအမူး စွဲလမ်းနေကြပါသလား..
အွန်လိုင်းပေါ်မှာပင် ဖတ်မိသော နောက်သတင်းတပုဒ်က မိမိရင်သွေးငယ်ကို ရေချိုးဇလုံအတွင်းမှာ တယောက်တည်းထားပစ်ခဲ့ပီး လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်းက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုနေမိတဲ့အတွက် ရင်သွေးငယ်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ဦးရဲ့အကြောင်း…
ဒါတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာနေပါသလဲ…
အယောက်စီ အယောက်စီတိုင်း ကိုယ်စီ ကိုယ်စီတိုင်းရဲ့ စိတ်အတွင်းနာကျင်မှုတွေ အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေ တိုးတိုးလာနေသည့် အခုအခါ သည်ဘဝတွေမှာ ဘာတွေက နာကျင်စေသလဲ ဘာတွေက ပျော်ရွှင်စေပါသလဲ…
စွဲလမ်းစိတ်တွေ ပိုများလာသည့်အခါ ဆုံးရှုံးရမှုပိုများလာတတ်သည့် လောကဓံတရားတွေအရ ကျမတို့တွေ စွဲလမ်းမှုတွေကို တိုးလာမှာကိုလဲကြောက် လျော့ပါးသွားမှာကိုလဲကြောက်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အစိမ်းရောင်ကမ္ဘာကြီးထဲ တကိုယ်တည်း ပုန်းအောင်းနေမှုတွေ များလာနေခဲ့တယ်ဆိုရင် မှားများမှားနေမလား…
လက်တွေ့ကမ္ဘာရဲ့ လူမှုဘဝ ထိုးနှက်ချက်တွေ၊ တာဝန်တွေ၊ ဝတ္တရားတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ရမှုတွေ၊ စိုးရွံ့မှုတွေ၊ စည်းတွေ ဘောင်တွေကို စိတ်ကုန်လာမိတဲ့အခါ …
လက်တွေ့မကျတဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုန်းဝှက်ထားလို့ရနိုင်တဲ့၊ စိတ်တူကိုယ်တူ လူတွေကို ရှာဖွေလာနိုင်တဲ့ Virtual World လေးတွေထဲမှာ ပျော်မွေ့လာနေတဲ့သူတွေထဲ ကိုယ်လဲ တယောက်အပါအဝင် ဖြစ်လာသောအခါ..
အဲ့ဒီ virtual world လေးထဲမှာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုန်းအောင်းနိုင်သမျှ ပုန်းအောင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမ်းဝှက်နိုင်သမျှ သိမ်းဝှက်ထားချင်မိတဲ့အခါ…
ကျမတို့တွေ အင်တာနက် အွန်လိုင်းတွေပေါ်မှာ ဂျီမေးလ် ဂျီတော့တွေနဲ့ ဖေ့ဘွတ် တွစ်တာ အစရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာ ရှိနေပေမဲ့ .. အချိန်ပြည့် အမြဲတမ်း အွန်လိုင်းသုံးနေတယ် ဆိုပေမဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက် စကားမပြောဖြစ် မက်ဆေ့ခ်ျမပို့ဖြစ် မေးလ်မပို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ ဘယ်လောက်များ ကြာမြင့်နေကြပြီဖြစ်ပါသလဲ…
အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ဂျီတော့တွေပေါ်မှာ အစိမ်းရောင်ပြထားနေတာတောင် ကိစ္စ အကြောင်းခြင်းရာ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ hi, hello လောက်တောင် မပြောဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိနေပါပြီလဲ…
ကျမတို့တွေဟာ တယောက်နဲ့တယောက် မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေက တဆင့် သူစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်သွားခဲ့သော သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်များရှိနေပါပြီလဲ..
တကယ်တော့ ကျမတို့တွေဟာ လက်တွေ့ဘဝကနေ အတုအယောင်ကမ္ဘာလေးဆီ ပြေးဝင်ခိုလှုံကြတာချင်းတော့ တူညီနေကြမှာပါ.. အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျမတို့တွေကို ဆက်သွယ်ထားတာက မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ကြိုးလေးတွေနဲ့ပေါ့… အဲ့ဒီကြိုးလေးတွေဟာ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရနိုင်ပေမဲ့ .. မမြင်ရပေမဲ့ ရှိနေတယ်လို့ သိနေနိုင်တဲ့ ကြိုးလေးတွေပေါ့…
ဒီ virtual world လေးထဲမှာ အဲ့ဒီကြိုးလေးတွေဟာ တခါတလေတော့လဲ ထင်ထင်ရှားရှား တခါတလေတော့လဲ မှေးမှေးမှိန်မှိန်… တခါတလေတော့လဲ အစိမ်းလိုက် ပြတ်တောက်သွား.. တခါတလေတော့လဲ ခလုတ်တိုက်မိမှ အလန့်တကြား…
ကျမ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ စကားလက်ဆုံကျမိတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ညခင်းလေး တခုပါ… သူမက ကျမကို hello တလုံး ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ ကျမတို့ သံယောဇဉ်တွေ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်..
တကယ်တော့ သူမနဲ့ ကျမဟာ ကျမတို့ရဲ့ gtalk list ထဲမှာ အချိန်အကြာကြီးရှိနေပေမဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စိမ်းနေတာချင်း တူနေပေမဲ့ စကားစမြည်မပြောဖြစ်ခဲ့တာ တော်တော်ကြာနေပီ ထင်ပါရဲ့…
ကျမတို့နှစ်ယောက် စကားစမြည်ပြောဖြစ်ရင်း သူမကို ကျမ မှတ်မှတ်ရရ ပြောမိတဲ့ စကားတခွန်းက ..
တကယ်တော့ ငါတို့တွေဟာ ကြိုးတွေလို ဖြစ်နေမှာ… ချည်တုန်း ခနသာ ခိုင်နေတယ်လို့ ထင်နေတာမျိုး၊ ဆက်သွယ်မှုဆိုတာကတော့ အဲ့ဒီကြိုးလေးတွေကို ကိုယ်က လွှတ်ချလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဘက်က ဖြတ်ချလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြတ်သွားတာမျိုးနေမယ်လို့….
ကျမတို့တွေ တင်းထားလွန်းတဲ့အတွက် ပြတ်ထွက်သွားတဲ့ ကြိုးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးမှာဖြစ်သလို လျော့ရဲရဲထားခဲ့မိတဲ့အတွက် ပြတ်သွားတာတောင် မသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရော… လိုအပ်တဲ့အခါမှ ကိုယ့်ကြိုးလေးကို ခလုတ်တိုက်မိလို့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြိမ်ရေတွေ ဘယ်လောက်များ များနေပါပြီလဲ…
ကျမရဲ့ mail box ထဲကို စာမရောက်တာ တော်တော်ကြာနေပီ ထင်ပါတယ်.. ကျမရဲ့ ပါစင်နယ်ဂျီမေးလ်အကောင့်ထဲကို သတိရတဲ့မေးလ်တစ်စောင်မှ ရောက်မလာသလို ကျမကလဲ သတိတရ ဘယ်သူ့ဆီကိုမှ မေးလ်မပို့ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာနေပီ…
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အလုပ်အတွက်သာ သီးသန့်သုံးတဲ့ မေးလ်မှာတောင် မဖြစ်မနေ Report ပို့ရမယ့် ကိစ္စနဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြရမယ့်ကိစ္စတွေ အတွက်သာ မေးလ်ပို့ဖြစ်ခဲ့တာ..
အသားကျနေတဲ့ လက်တွေကသာ အီးမေးလ်အကောင့်နာမည် ပတ်စဝပ်တွေကို ရိုက်ထည့်နေမိတာ
ကိုယ့်ရဲ့ Inbox မှာ စာတစောင်မှ အသစ်ရောက်မလာတဲ့ မေးတွေကို မပျင်းမရိဖတ်နေဖြစ်ခဲ့တာ တော်တော်ကြာနေခဲ့ပါပြီ…
ဂျီတော့ပေါ်မှာ အစိမ်းရောင် တခါတလေတော့လဲ အနီရောင် တခါတလေတော့လဲ လိမ္မော်ရောင်ပြောင်းထားပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ယောင်ချာချာလုပ်နေဖြစ်ပေမဲ့ စိမ်းနေလို့လဲ Available မဟုတ်သလို နီနေလို့လဲ busy နေတာမဟုတ်ဘဲ ကြုံရာသင့်ရာ ပြောင်းထားနေတဲ့အကြိမ်ရေ များလာနေတဲ့အခါ…
လက်တွေ့ကျတဲ့ ဘဝတွေကနေ ခနတဖြုတ် ရှောင်ရှားခွင့်ရတဲ့ နေရာလေးတွေမှာတောင် ပျင်းရိမှုတွေနဲ့ စိမ်းကားသွေဖယ်ခြင်းတွေ ခံလာရသောအခါ..
လက်တွေ့ကျတဲ့ ဘဝတွေဆီကို တဖန် စောင်းငဲ့ကြည့်မိပြန်တယ်
မနက်မိုးလင်း ပီးတော့ နေ့လယ် ခနနေတော့ ညနေစောင်း အိပ်ဖို့ မျက်စိမှိတ်တဲ့အချိန်ဟာ သန်းခေါင်ယံ ည ၁၂ နာရီထက်တော့ အသာလေး လွန်နေခဲ့တဲ့အကြိမ်ရေ များလာနေတဲ့အခါ…
ပြုံးပြဖို့ အားယူရသည်.. ရယ်ပြဖို့ နှုတ်ခမ်းဟရသည်.. နှုတ်ဆက်စကားဆိုဖို့ နှုတ်ဖျားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထားရသည်.. ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတဲ့ အကြိမ်ရေတွေ များလာနေခဲ့ရသည်..
ဖုန်းဆက်တဲ့အခါတွေမှာ လိုရင်းကိုဖြတ်ပီး မပြောဖြစ်ဖို့၊ အလ္လာပ သလ္လာပ ပြောဖို့၊ ပဋိသာရ စကားဆိုဖို့၊ ပီယဝါစာ ချိုသာသော စကားဆိုဖို့၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကို အတွင်းကျကျ မေးမြန်းဖို့၊ မလိုအပ်ဘူးဟု ကိုယ်ထင်နေသည့် စကားလုံးတွေကို မပြောမဖြစ်ပြောရဖို့ အားထုတ်ရသည့် အကြိမ်ရေ များလာနေသည့်အခါ…
ကွန်ပျူတာရှေ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည့်အချိန်တွေထဲကနေ လူစုစုကြားထဲ စကားများများပြောဖို့ ကြိုးပမ်းရသည့်အခါ၊ သူတို့ နှစ်သက်လောက်မည့် သတင်းစကားမျိုး ကိုယ့်နှုတ်ဖျားက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရသည့်အခါမျိုးတွေမှာ…
ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲ မျက်စိမှိတ်လုပ်မနေဖို့၊ သူများတွေအကြိုက် ခေါင်းညိတ်ဖို့၊ လူတယောက်ရဲ့ အတင်းကို သူ့နောက်ကွယ်မှာ မြိန်ရေယှက်ရေပြောနေတဲ့အခါ မျက်နှာမပျက်ဘဲ နားထောင်နိုင်ဖို့၊ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် မျက်နှာထားနိုင်ဖို့ ဒါတွေ များလာသည့်အခါ….
စာဖတ်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်တဲ့အခါတွေမှာလဲ တက်ကျမ်းတွေနဲ့ မိတ္တဗလဋီကာလို လူ့အကြိုက် လူ့အထာ နောကျေနေအောင် ရေးထားတဲ့ ကျမ်းတွေကို ဖတ်ဖို့ အချိန်ပေးလာရသောအခါ….
အခုတော့ ဆရာဖြစ်ချင်နေတဲ့ လူတွေကို နာမည်ရှေ့မှာ ဆရာတပ်ပီး ခေါ်နိုင်ဖို့၊ နာမည်ကောင်းရမယ့် ကိစ္စတွေမှာဆို ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ပေမဲ့ နာမည်လိုချင်နေတဲ့သူတွေကို နာမည်တပ်ပေးပီး ချီးကျူးစကားပြောဆိုဖို့အတွက် ဝန်မလေးတော့….
ဘယ်လို ကိစ္စရပ်တွေက မှားနေတယ်လို့ ထင်ပီး ဘယ်လိုကိစ္စရပ်တွေက မှန်နေတယ်လို့ ထင်နေပါသလဲ…
ထောက်ခံသူများနေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေက မှန်တာများပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိပေမဲ့ ထောက်ခံသူလဲ မရှိသည့် ကိစ္စရပ်တွေက လူကြိုက်နည်းပီး အမှားများလာနေသောအခါ…
တချို့ကိစ္စရပ်တွေကို မှန်ချင်ယောင်ဆောင်ပီး တချို့ကိစ္စတွေကို မှားနေတယ်ဟု လက်တို့ အတင်းပြောတတ်တာများလာနေသောအခါ…
ဘာတွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ ဘာတွေက ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ မှားနေခဲ့ပါသလဲ…
မနေ့ညကတော့ လသာတဲ့ ည မဟုတ်ပေမဲ့ ကြယ်တွေ စုံစုံညီညီ လင်းနေခဲ့တာကို မြင်ခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီကြယ်တွေထဲက ကြယ်လေးတစင်း ဖြုတ်ခနဲ ကြွေကျသွားတာကို ကျမ မှတ်မှတ်ရရ မြင်လိုက်ပါတယ်..
ကောင်းကင်ပြင်ကြီးထဲကနေ ကြယ်တပွင့်ကလဲ စုတိစိတ်ကျ ကြွေပေးရမယ်.. ကိုယ်ကလဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြွေသွားတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကင်ပြင်ကို မော့ကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်လဲ ဖြစ်ရမယ်…
အဲ့ဒီလိုမျိုး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြယ်ကြွေသွားတဲ့အခါ ဆုတစ်ခု တောင်းရတယ်.. အဲ့ဒီ တောင်းတဲ့ဆုကလဲ ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ ဘယ်တုန်းက ရှိခဲ့ဖူးပါသလဲ..
ရှိခဲ့ဖူးတာ ကျိန်းသေသလား မကျိန်းသေဘူးလား..
ကြယ်ကြွေတာကို မော့ကြည့်နေခဲ့တဲ့ မော့ကြည့်နေဆဲကျမ ဆုမတောင်းဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..
တောင်းလို့ ပြည့်ရင် ဆုက တဆုတည်း ရမှာမို့လို့ လို့ တွေးမိရင် လိုချင်လောဘတွေ များလိုက်တာလို့ လှောင်ရယ်စရာများ ဖြစ်နေမလား…..
အဲ့ဒီအချိန်က အဲ့ဒီလိုအတွေးကို တွေးလိုက်မိသလား မတွေးလိုက်ဘူးလား အခုနေခါမှာတောင် ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာ မကျိန်းသေတော့သောအခါ….
(15-2-2011၊ 93း8 pm)
at 6:34 AM Labels: စိတ်ကူးတည့်ရာ
jr February 17, 2011 at 9:56 PM
"ကျမရဲ့ mail box ထဲကို စာမရောက်တာ တော်တော်ကြာနေပီ ထင်ပါတယ်.. ကျမရဲ့ ပါစင်နယ်ဂျီမေးလ်အကောင့်ထဲကို သတိရတဲ့မေးလ်တစ်စောင်မှ ရောက်မလာသလို ကျမကလဲ သတိတရ ဘယ်သူ့ဆီကိုမှ မေးလ်မပို့ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာနေပီ… "
anaw lay... same here!
but I do miss ya..
ခုတော့ မီးစိမ်းစိမ်း မစိမ်းစိမ်း .....
လာပြီး Hi လိုက်ပါတယ် ..
အဖြူရောင်နတ်သမီး February 21, 2011 at 3:04 AM
မြစ်ကျိုးအင်း February 22, 2011 at 11:32 AM
မိတ်ဆွေတွေရဲ့ နှလုံးသားတွေက ပိုဝေးဝေးသွားတာ ကြာပေါ့။
ကိုယ်ထမ်းထားရတာ မဟုတ်ပေမယ့် မ hi ဖြစ်တာ ကြာတဲ့သူတွေကို
ဖျက်ပြစ်လိုက်မလားဆိုတဲ့ အတွေးဆိုးတွေတောင် ခဏခဏဝင်မိပါရဲ့..။
Anonymous March 3, 2011 at 11:14 PM
"စိမ်းနေလို့လဲ Available မဟုတ်သလို နီနေလို့လဲ busy နေတာမဟုတ်ဘဲ ကြုံရာသင့်ရာ ပြောင်းထားနေတဲ့အကြိမ်ရေ များလာနေတဲ့အခါ…"
ကြိုက်တယ် ...အစ်မတော့ real world မှာ ပျော်အောင်နေတတ်နေပြီမို့ ဒီဘက်ကို ရောက်ကို မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး ညလေးရေ့....
ငါ့ညီမလေး အစစ်အမှန် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...လို့
Angel Shaper June 4, 2011 at 6:50 AM
ကြိုးစလေး လှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်...အနော်ရေ... ခုမှဖတ်ဖြစ်တယ်...နော်... Virtual World မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Real World မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်... အဆင်ပြေအောင် ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လေနော်...